K9 Mask® कुकुरहरूका लागि 'चरम ब्रीथ' N95 र सक्रिय कार्बन एयर फिल्ट - राम्रो एयर टीम द्वारा K9 मास्क
घर > सबै > K9 Mask® कुकुरहरूका लागि 'चरम ब्रीथ' N95 र सक्रिय कार्बन एयर फिल्टरहरू - रंगहरू
गुलाबी / सानो - $ .49.00 ०.०० अमेरिकी डलर गुलाबी / मध्यम - $ .49.00 ०.०० अमेरिकी डलर गुलाबी / ठूलो - $ .49.00 ०.०० अमेरिकी डलर गुलाबी / अतिरिक्त ठूलो - $ .49.00 ०.०० अमेरिकी डलर कालो / सानो - बिक्रि भयो कालो / मध्यम - $ .49.00 ०.०० अमेरिकी डलर कालो / ठूलो - $ .49.00 ०.०० अमेरिकी डलर कालो / अधिक ठूलो - बिक्रि भयो रातो / सानो - $ .49.00 ०.०० अमेरिकी डलर रातो / मध्यम - $ .49.00 ०.०० अमेरिकी डलर रातो / ठूलो - $ .49.00 ०.०० अमेरिकी डलर रातो / अधिक ठूलो - $ .49.00 ०.०० अमेरिकी डलर सुन्तला / सानो - $ .49.00 ०.०० अमेरिकी डलर सुन्तला / मध्यम - $ .49.00 ०.०० अमेरिकी डलर सुन्तला / ठूलो - $ .49.00 ०.०० अमेरिकी डलर सुन्तला / अधिक ठूलो - $ .49.00 ०.०० अमेरिकी डलर
रंग: कालो, रातो, गुलाबी, सुन्तला।
3 - बदल्न योग्य N95 र सक्रिय कार्बन 'चरम ब्रीथ' एयर फिल्टर रिफिलहरू समावेश छ।
'अस्वस्थ' मा 'खतरनाक' AQI २-100--500०० मा प्रयोग गर्नुहोस्।
एस मा माइक्रो कण को ​​लागी उत्तमmoke, राख, धूलो, रसायन, Allergens, मोल्ड, परागकण, कालिगढ, धुवाँ, ओजोन, र ब्याक्टेरिया।
To०% ग्रेटर फिल्टेरेशन प्रभावशीलता हाम्रो तुलनामा "सफा सास" एयर फिल्टरहरू।
विश्वको पहिलो वायु प्रदूषण फेस मास्क विशेष गरी तपाईंको कुकुरका लागि डिजाइन गरिएको हो। वायु प्रदूषणबाट चरम सुरक्षा तपाईको कुकुरको स्वास्थ्यलाई खतरामा छ।
के '9 चरम ब्रीथ 'एयर फिल्टर प्रभावकारीको साथ KXNUMX मास्क बनाउँछ?
प्यान्टि Ex्ग एक्जेल वाल्भले पेन्टि fromबाट हवा, चिसो र ताप जारी गर्दछ।
हामी रोग नियन्त्रण नियन्त्रण केन्द्र (CDC) लाई N95 र PM2.5 सिफारिश N9 र PMXNUMX सक्रिय कार्बन एयर फिल्टरको साथ KXNUMX मास्कमा प्रदूषित हवालाई जंगल आगोको धुवाँ, धुलो, खरानी, ​​रसायन, विष, मोल्ड, एलर्जी, र ब्याक्टेरियाहरूबाट शुद्ध गर्न प्रयोग गर्दछौं।
K9 मास्कमा कसरी चरम ब्रीथ (XTRM) एयर फिल्टर सम्मिलित गर्ने।
मेरो फिल्टरले एयर फिल्टर प्रयोग गरेर K9 मास्क कति लामो समयसम्म लगाउन सक्छ?
K9 मास्कीले थूलीको रूपमा काम गर्दछ। K9 मास्कको लागि यो दोस्रो उद्देश्य हो। मास्कको प्राथमिक कार्य कुकुरलाई प्रदूषित हावाबाट जोगाउनु हो। जे होस्, K9 मास्कले कुकुरलाई भौंकने र काटनेबाट थप्पड गर्न कार्य गर्दछ। ज wild्गल आगो, वा अन्य चरम मौसम घटनाहरूको चिन्ताको बेला, कुकुरहरू चिन्तित हुन्छन्। K9 लगाएको कुकुर मास्क एक थूली कुकुर र यी वातावरण मा यो वरिपरिको रक्षा गर्न उपयोगी छ।
बदल्न सकिने N95 PM2.5 र सक्रिय कार्बन 'चरम ब्रीथ' (XTRM) एयर फिल्टरहरू जुन तपाईं मास्कमा लिनुहुन्छ र धुनु हुँदैन।
धुनु अघि K9 मास्क वायु फिल्टर हटाउनुहोस्। मास्क डिटर्जेंटको साथ चिसो पानीमा धोइन्छ र त्यसपछि वायु सुक्खामा झुन्ड्न सकिन्छ।